မီးရထား Tools များမော်ကွန်း - ထို rayhab
TÜVASAŞနှင့်ကအမျိုးသားရေးပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေ၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသားဌာနေလျှပ်စစ်ရထားသတ်မှတ်မည်ဒီဇိုင်းအလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားမီးရထားTÜVASAŞဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခံရဖို့ရည်ရွယ်အဖြစ်လူမီနီယံကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ [ပို ... ]
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာတင်သွင်းနေသည်အပေါင်းတို့နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိုင်ငံခြားမှီခိုမော်တော်ယာဉ်များဖြင့်လုပ်သောလမ်းထွက်ယူသွားတတ်၏သည့်တစ်နှစ် 1866 ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအတွက်စတင်။ တသမတ်တည်းဤကိစ္စတွင်ရထားလမ်း၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းပြဿနာတွေနဲ့ကြားဖြတ်ခြင်း, ကုန်ကျစရိတ်မှဦးဆောင် [ပို ... ]
ရထားအစုံ၏TÜVASAŞအခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ DMI DMI + M + ပုံစံ3ယာဉ်များပါဝင်ပါသည်ကထုတ်လုပ်။ ယာဉ် M ကသတ်မှတ်ထားရထားလှည်းအခါ34 မော်တော်ယာဉ်ကဆက်ပြောသည်သည်က56 မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ရထား set ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ [ပို ... ]
ဒါဟာဘယ်အချိန်မှာ Metro ခြင်းဖြင့်ကိုလက်စသတ်ခံရလိမ့်မည်နည်း
ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Metro ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဝန်ကြီးဌာနကပြင်ဆင် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ 2018 Izmir အတွက်နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့, ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစီမံကိန်းကို 13,5 အရှည်ကီလိုမီတာတစ်မက်ထရိုလိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ İzmirNarlıdere Metro စီမံကိန်း၏ကလူပြီးနောက် [ပို ... ]
TÜDEMSAŞ, Talns အမျိုးအစားကတော့လှည်း Load Ed ကလိုအပ်ချက်များအားဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပါလိမ့်မည်
စားနပ်ရိက္ခာတစ်ဆယ်ကွဲပြားခြားနားသောအပင်နှင့်ကုန်တင်ကားတစ်စီး၏အထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Demirpolat ကုမ္ပဏီအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ Nurettin Demirpolat Talns အမျိုးအစားပေါ်တည်ရှိပြီး, ကုမ္ပဏီနှင့်အညီလုပ်ငန်းလိုင်းများအတွက်တည်းဖြတ်မူဆွေးနွေးရန်TÜDEMSAŞသွားရောက်ခဲ့သည်။ TÜDEMSAŞ [ပို ... ]
ရှင်းပြချက် TCDD မိန်းမောတွေဝေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ Marmaray အမှားကို 1
အချိန်ကြောင့် Kadikoy Marmaray အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှားမှရပ်တန့်ခြင်း, ခရီးသည်များသံလမ်းဆင်းသွားလာ၏။ လှည်းbayılırkလက်ရုံးတစ်ဦးခရီးသည်လှည်းများထံမှပေါ်ကိုဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားနေထိတ်လခရီးသည်များက 1 açılmayınတစ်ကြိမ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Kadikoy ဖို့အချိန်ကနေအမှားပုံမှန်လမျးညှနျခ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက် [ပို ... ]
ဖြစ်ခြင်း၏ကမ္ဘာ့ဖလားအမှတ်တံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon Way ကိုထုတ်လုပ်TÜDEMSAŞ,
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager Erol Arikan နှင့်ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုTÜDEMSAŞသွားရောက်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ TÜDEMSAŞမှ General Manager Mehmet Başoğluစုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက် Wagon ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနဲ့ R & D ကိုဦးစီးဌာနနှင့်အတူ [ပို ... ]
တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ General Manager Mehmet Basoglu, ဥရောပနိုင်ငံများသို့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကားများအရောင်းအဘို့အမိန့်များလက်ခံရရှိကြေညာခဲ့သည်။ ပိုလန်, ဂျာမနီနှင့်သြစတြီးယားများအတွက်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်. သဘောပေါက်ကုန်တင်ကားများထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုး [ပို ... ]
အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲများ, ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်TÜDEMSAŞန်ထမ်းများအတွက်အစဉ်အလာ iftar အစီအစဉ်ကိုဖြစ်လာTÜDEMSAŞအတူတကွ iftar ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို program မှာစကားပြောသော, ဒုတိယအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Mehmet TÜDEMSAŞBaşoğluပိုလန်, ဂျာမနီနှင့်သြစတြီးယားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကျင်းပ [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဒုတိယဝန်ကြီး Enver İskurtနှင့် Selim Dursun တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကို (TÜDEMSAŞ) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet Başoğluသူ့ရုံးခန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုမှ Sivas ထံမှအခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး [ပို ... ]
အဆိုပါ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများအမျိုးသား Wagon TÜDEMSAŞ
အဆိုပါ bogie ပြီးပါကအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်TÜDEMSAŞလှည်းနှင့်သုံးမျိုး၏ငါးအမျိုးအစားများ, ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet Basoglu အပိုင်းပိုင်းထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း 2019-2020 250 နှစ်တွင်မှအမျိုးသားရေးကုန်တင်လှည်းများ၏မျိုးဆက်သစ်ကဆိုသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခြောက်နှစ် [ပို ... ]
TCDD Wagon Wagon Flash ကိုထုတ်လုပ်သော Yavuzlar ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း!
အဆိုပါ concordat başladnılဆက်လက်သတင်းကိုကြားနေစဉ် Sakarya ပြီးခဲ့သည့်လက7မကြာခဏသူမက 1 concordat ရှိပြီးသားကုမ္ပဏီတွေကြေညာနှစ်တွင်၎င်းတို့၏အချိန်ယူမှစတင်ခဲ့သည်။ ငွေလဲနှုန်းအတွက်စီးပွားရေးနှင့်အတက်အကျပြီးနောက်; အဖြစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီတွေအတွက် Sakarya [ပို ... ]
ပြင်သစ် INVEHO, TÜDEMSAŞပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့စေချင်
မြင်TÜDEMSAŞ INVEHO ပြင်သစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုအလုပ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏အောင်မြင်မှုကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုအစိမ်းရောင်အလင်းပေးသောဖော်ပြခဲ့သည်။ သုံးကွဲပြားခြားနားသောပြင်သစ်တွင်ဒေသများနှင့်လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ကော်မတီနဲ့အတူလက်တွဲပြီးစုစုပေါင်း6400 စက်ရုံတွေ [ပို ... ]
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်TÜDEMSAŞများအတွက် INVEHO ဆွေးနွေးချက်တွေအခွင့်အလမ်းများ
TÜDEMSAŞ INVEHO နှင့်ပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်အရာရှိများအကြားကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးတွင်။ အထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet Başoğlu INVEHO ရှင်းလင်း၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာအောက်မှာကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးမှာကျနော်တို့ရဲ့ Fredeic မိတ္တူးကူးစက်နှင့်ဒါဝိဒ် Grolier ကုမ္ပဏီသွားရောက်လည်ပတ်သူကိုTÜDEMSAŞကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များ။ ဝန် [ပို ... ]
အဆိုပါဥရောပအာရှရထားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon အမျိုးသားတရားမျှတသောအတွက်ပြင်းထန်သောစိတ်ဝင်စားမှု
ဥရောပအာရှဥရောပအာရှရထားပို့ဆောင်ရေး၏ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသောနှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာတရားမျှတတစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဒုတိယဝန်ကြီး Selim ပြပွဲ Dursun နေဖြင့်ဧည့်သည်များမှဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးဌာနန်ကြီးဌာန, မီးရထားနှင့်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေရဲ့န်ကြီးဌာန, [ပို ... ]
Bilecik မြို့တော်ဝန် Nihat နိုငျသညျ, 100 သမ္မတနိုင်ငံ။ စီမံကိန်း၏ရူပါရုံကို Bilecik အတွက်ရရှိပါလိမ့်မယ် Wagon Caféအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ; အပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် '' Hams Wagon Bilecik'i ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်စင်တာတွင်Caféနှင့်အတူခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းတညျဆောကျ 'ကိုသုံးပြီးအသုံးအနှုန်းတွေမြို့တော်ဝန် Nihat Can အောက်ပါ [ပို ... ]